Magnesium L-threonate mpanamboatra vovoka tsara indrindra & orinasa
Ny vovony Magnesium L-threonate (778571-57-6)
Aprily 7, 2020
Cofttek no mpanamboatra vovoka magnesium L-threonate tsara indrindra any Shina. Ny orinasanay dia manana rafitra fitantanana famokarana tanteraka (ISO9001 & ISO14001), miaraka amin'ny fahafaha-mamokatra 3300kg isam-bolana.
Unit: 1kg / kitapo, 25kg / Amponga
Manezioma L-threonate vovoka (778571-57-6) horonantsary
Magnesium L-dônerôna vovoka Specifications
Name: Manezioma L-threonate
Formula Molecular: C8H14MgO10
Molekular lanja: 294.495 g / mol
Anarana simika: Magnesium (2R, 3S) -2,3,4-trihydroxybutanoate
Synonyms: Magnesium L-Threonate
Antsasak'aina: N / A
Solubility: Soluble ao amin'ny DMSO, Methanol, Rano
Fepetra fitehirizana: 0 - 4 C mandritra ny fotoana fohy (andro ka hatramin'ny herinandro), na -20 C mandritra ny fotoana maharitra (volana)
fampiharana: Magnesium L-Threonate no endrika manintona indrindra amin'ny pilina Magnesium. Ampiasaina hanatsarana ny fitadidiana, manampy amin'ny torimaso ary hanatsarana ny fiasan'ny kognitifo manontolo.
Bika Aman 'endrika: White powder
Vovoka magnesioma L-threonate (778571-57-6) NMR Spectrum
Raha mila COA, MSDS, HNMR isaky ny vokatra sy fampahalalana hafa ianao dia mifandraisa aminay mpitantana marketing.
Ny manezioma, araka ny fantatsika dia mineraly lehibe, tena ilaina amin'ny fahasalamana - indrindra ho an'ny ati-doha sy ny rafi-pitabatabana manontolo. Maneziôma - iôna miiba (ion iray voadidy tsara), dia manan-danja tokoa amin'ny fananganana boribory neuronal satria mifamatotra amin'ireo mpandray neurotransmitter ary mpiara-miombon'antoka amin'ny enzyme neuronal. Fantatra ifotony izy io mba hanampiana amin'ny fampihenana ny fanahiana, ny famoizam-po sy ny olana ara-pahasalamana. Ao amin'ny sehatry ny fitsaboana, ny ankamaroan'ny manam-pahaizana momba ny fahasalamana dia mahatsapa fa ilaina ny manezioma fanampiny ho an'ireo marary amin'ny asany. Ny fanampiana ara-tsakafo natokana ho an'ny manezioma ankehitriny dia eo anelanelan'ny 300 sy 420 milligrams / andro ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​izay azo amin'ny alàlan'ny sakafo. Na izany aza, ny tombana antonony takiana (EAR) ho an'ny manezioma dia tsy azo amin'ny alàlan'ny sakafo. Misy statistika mampatahotra any. Ity farany dia mitarika amin'ny tsy fahampian'ny magnesium izay mety hiteraka olana ara-pahasalamana lehibe toy ny ratra amin'ny ati-doha mampivadi-po, aretin-kozatra, aretina Parkinson sy Alzheimer, aretin'andoha, adin-tsaina, ratra amin'ny ati-doha mahatsiravina, fanintona ary aretina mifandraika amin'ny taolana. Izany no mahatonga ny endrika manezioma fanampiny isan-karazany ao amin'ilay sary. Na izany aza, misy ny olana manjo ny fampiasana manezioma misy ho fanampiana ho an'ny olan'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-tsaina - toa tsy mora tafiditra ao amin'ny ati-doha izy ireo. Endrika manezioma manezioma - magnesium l-threonate, toa manampy eto.
Fanambarana - vovoka magnesioma L-Threonate
Ny famenon-tsolika manezioma fahita mahazatra dia voatanisa ho amin'ny fandraisana tsara kokoa ary toy izany koa ny magnesium I-threonate. Izany dia tratra amin'ny alàlan'ny fifamatorana tsara kokoa amin'ny molekiola manezioma izay manampy amin'ny fanatsarana ny fitoniana, ny tahan'ny fandraisana ary ny fahombiazany. Manezioma I-threonate no endrika manezioma farany indrindra. Ekipan'ny neuroscientista avy amin'ny Massachusetts Institute of Technology sy Tsinghua University any Beijing no namolavola ny magnesium I-threonate miaraka amina fiarahana magnesium sy I-threonate, metabolite an'ny Vitamin C. Ity fahagagana ity fanampin fanodinana mora foana amin'ny alàlan'ny sivana miaro ny ati-doha mba hahatratra ny toerana ilana azy. Ny magnesium I-threonate tsy voajanahary dia tsy misy dikany satria lehibe tokoa ny tombony azo.
Misy voajanahary amin'ny sira Epsom, ny sulphate magnesium dia tsy mora entin'ny vatana ary misy vokany hafa ihany koa. Ny fampifangaroana asidra threonic sy maneziôma, magnesium I-threonate dia natsangana ho toy ny sira izay afaka mivezivezy mora foana mankamin'ny ati-doha avy amin'ny ra. Talohan'izay dia azo atao izany amin'ny alàlan'ny fandefasana intravenous. Raha ny fikarohana biby dia io koa no fomba mahomby indrindra hampidirana maneziôma ao amin'ny sela atidoha.
Ireo fanampiana magnesium I-threonate ireo dia voaporofo ho loharanom-pahombiazana mahomby indrindra hanohanana ny fiasan'ny kognita ary hamorona ny fianakavian'ireo nootropics miaraka amina fanafody fanafody.
Fiasa magnesium I-threonate
Ny sakafo maoderina dia tsy manana maneziôma ary ho fanampin'izany, ny fanafody misy matetika dia mampihena ny haavon'ny magnesium. Any amin'ny firenena maro, anisan'izany i Etazonia, latsaky ny 50% ny mponina no mahafeno ny tahan'ny magnesia omena azy (RDA) isan'andro. Na dia mila manezioma betsaka aza ny ati-doha dia misy ny fifantohana ambony indrindra ao amin'ny ra.
Manezioma dia pivotal ho an'ny asa sy ny fepetra neurolojia maro izay misy:
Maratra sa fahasimban'ny ati-doha lehibe
izany tebitebin '
Ny toetran'ny Alzheimer
Parkinson ny aretina
Fangalarana sy Schizophrenia
Mampihomehy fa tsy misy be loatra ny manezioma izay miafara amin'ny faritry ny ati-doha, mametra ny fahombiazany. Izany no ilana ny famenonan'ny magnesium l-threonate hamenoana ny tsy fahampian'ny maneziôma, indrindra rehefa olona tsy mihinana maneziôma manara-penina amin'ny alàlan'ny loharanom-pahalalana dia mampiseho ny fihenan'ny neurocognitive sy ny soritr'aretina mifandraika amin'izany.
Fampiasan'ny magnesium l-threonate
Miditra izy mandra-pahatongany any amin'ny faritra mety amin'ny ati-doha, izay ilana famatsiana manezioma.
Manatsara ny fahafahan'ny ati-doha mandroso sy mivoatra izay manampy amin'ny fahatsiarovan-tena sy hianarana hitranga.
Manampy amin'ny famelomana ny fivelaran'ny sela ati-doha vaovao izany.
Magnesium I-threonate vovoka tombony
Manezioma dia manana tombontsoa ara-pahasalamana maro. Raha raisina amin'ny refy marina, dia fantatra fa mampiakatra ny toe-po, manatsara ny fahaizan-tsaina hiatrehana ny adin-tsaina, manatsara ny fahaizana mifantoka sy mifantoka, mampitombo ny angovo ary manatsara ny kalitaon'ny torimaso. Izy io koa dia manafoana ny zavona amin'ny ati-doha maraina (toe-javatra misavoritaka, tsy fahatsiarovan-tena ary tsy fahampian'ny fifantohana sy fifantohana ary fahazavana ara-tsaina) - famantarana iraisan'ny Vestibular Migraine
Ny fahaizan'ny atidoha miova dia ny neuroplasticity (fantatra koa amin'ny hoe plastika neural, na plastika amin'ny ati-doha). Ity fahafaha-manao ity dia manome antoka fa ny atidoha dia afaka manamboatra fifandraisana vaovao (fifamatorana neuronal) ary misy fiantraikany amin'ny fianarana, fahatsiarovana, fitondran-tena ary fiasan'ny kognita ankapobeny. Ny plastika amin'ny atidoha dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fizotry ny fahanteran'ny ati-doha, miaraka amin'ny fahaverezan'ny plastika miteraka fahaverezan'ny fiasan-tsaina. Ny fikarohana momba ny neuroplasticity na ny plastika ao amin'ny ati-doha dia mitombo ary ny manam-pahaizana momba ny fahasalamana sy ny mpahay siansa dia mahatsikaritra fa ny fitomboan'ny haavon'ny magnesium sela dia mety hampiakatra ny hakitroky ny synaps sy ny plastika, hanatsara ny fiasan'ny kognita amin'ny ankapobeny. Izy io koa dia mampiseho valiny manome toky fa hanampy amin'ny "famerenana amin'ny laoniny" ny ati-doha amin'ny lozam-pifamoivoizana ateraky ny ati-doha sy ny olana ara-pahasalamana. Ny fanampiana magnesium rehetra dia mety tsy mahasoa amin'ny famahana ilay olana - ny magnesium l-threonate dia voalaza fa hiampita ny sakana amin'ny ati-drà mba hampiakarana ny haavon'ny magnesium ao amin'ny ati-doha.
Ankoatr'izay dia manana tombony ara-pahasalamana hafa koa izy ao anatin'izany ny fanoherana ny sohika, ny fikorontanan'ny hozatra, ny fanamafisana ny hery fiarovan'ny vatana, ny BP avo, ny osteoporose ary ny aretim-po.
Ny magnesium l – threonate dia misy vokany miala sasatra, manalefaka ny hozatra ary manampy amin'ny fisorohana sy fanalefahana ny fanintona ary ireo olana mifandraika amin'izany.
Ny Magnesim l-threonate dia manamafy ny taolana amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny hakitroky ny taolana, mampihena ny fivontosana, manatsara ny kalitaon'ny torimaso ary manadio ny lalan-dra mandevon-kanina.
Magnesium I-threonate dia vokatra vaovao ary noho izany dia tsy manana porofo maharitra amin'ny fampiasana azy. Vao mainka mampitombo ny lanjan'ny fikarohana marina io. Ny fitsarana ara-pitsaboana natao dia mitazona ny maha-azo itokiana azy.
Fitsapana ara-pitsaboana ny magnesium I-threonate
Gazety ara-pitsaboana navoaka dia nanome fomba fijery mahaliana vitsivitsy sy tombontsoa ara-pahasalamana avy amin'ny Magnesium I-threonate. Vondrom-pianarana iray misy olona antitra manana fanjifana, fahatsiarovana, aretin-torimaso ary fitaintainanana no voamarika tamin'ny lafiny 4 samy hafa - fahatsiarovana miasa, fahatsiarovana manimba, fifantohana ary fiasan'ny mpanatanteraka. Izany dia nahitana fahaiza-manao maromaro izay manampy amin'ny famoronana tanjona, drafitra ary fanatanterahana. Ny lohahevitra dia natolotra niaraka tamin'ny Magnesium I-threonate nandritra ny 3 volana nifanesy ary araka ny nampoizina dia fantatra fa nitombo be ny haavon'ny magnesium. Izany dia nahatonga ny fahombiazan'ny lohahevitra tamin'ny lafiny efatra amin'ny fitsapana rehetra. Niteraka fihenan'ny taonan'ny ati-doha biolojika koa izany. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ireo lohahevitra ireo dia nitombo efa ho 10 taona latsaka tamin'ny taonan'ny ati-dohany. Na izany aza, ny magnesium I-threonate dia tsy dia nanampy firy tamin'ny fanatsarana ny torimaso, ny fisondrotan'ny toe-po na ny fampihenana ny fitaintainana momba an'io raharaha io.
Fianarana momba ny biby ho an'ny vovo-magnesia I-threonate
Ny fikarohana natao tamin'ny biby ho an'ny Magnesium I-threonate dia nahitana fikarohana mahaliana.
Ny aretina mitebiteby amin'ny Magnesium I-threonate
Ny magnesium I-threonate dia endrika magnesium ambony izay miasa toy ny fialan-tsasatra voajanahary ary miasa amin'ny fampihenana ny hormonina miady saina, mampitombo ny fitoniana ny neurotransmitter GABA fa tsy. Izy io koa dia manampy amin'ny fisorohana ireo simika adin-tsaina miditra amin'ny ati-doha. Ny fitsapana ny magnesium I-threonate amin'ny biby dia nanaporofo fa mety ho antony manampy amin'ny fikorontanan'ny tebiteby, phobias mahazatra ary aretim-po mahatsikaiky.
Manezioma I-threonate mifanohitra amin'i Alzheimer sy Dementia
Ny magnesium I-threonate dia fantatra ihany koa amin'ny fitsaboana aretin-tsaina sy aretina Alzheimer koa. Ny voalavo sy ny totozy dia nampiasaina tamin'ny fikarohana an'i Alzheimer satria ny fahatsiarovany sy ny fivelaran'ny ati-doha dia mitovy amin'ny an'ny olombelona. Ny magnesium I-threonate dia hita fa manampy amin'ny fanafoanana ny fahaverezan'ny fahatsiarovana sy ny fihenan'ny saina amin'ny voalavo.
Misy fifandraisana fantatra eo amin'ny fihenan'ny haavon'ny magnesium sy ny fahaverezan'ny fahatsiarovana. Ny fitomboan'ny haavon'ny magnesium amin'ny sakafo dia miteraka fihenan-tena. Ny fikarohana dia manantena ny ankamaroan'ny tombotsoan'ny neuroprotective izay notsapaina tamin'ny biby mpikiky izay maneho ny mety hitsaboana Alzheimer amin'ny olombelona.
Manezioma I-threonate mifanohitra amin'ny fianarana sy fitadidiana
Ny voalavo rehefa ampiarahina amin'ny Magnesium I-threonate dia nahatonga azy ireo ho marani-tsaina kokoa. Naneho ny fahavononany hianatra sy hanatsara ny asa izy ireo, ho fanampin'ny fahatsiarovana maharitra sy maharitra.
Porofo sy fanohanana ho an'ny magnesium Threonate
Ny fikarohana voalohany momba ny magnesium threonate dia naseho; fanamboarana chromosome simba, fitomboan'ny haavon'ny magnesium ao amin'ny ati-doha raha oharina amin'ny karazana magnesium hafa, miasa tsara kokoa amin'ny faritra fitadidiana ary ambonin'izany rehetra izany ny fanavaozana fahatsiarovana fohy. Amin'ny fihinanana maneziôma amin'ny endriny rehetra amin'ny vatana dia antenaina ny hanao hetsika maro izay misy ny fiasan'ny hozatra, ny fananganana proteinina ary ny asidra matavy, ny vitamina B, ny fampidiran-dra, ny insreting insuline ary ny fananganana ATP. Ho fanampin'izany, manezioma miasa ho toy ny stimulant ho anzima isan-karazany manerana ny vatana. Izy io koa dia manampy amin'ny fananganana ny hery fiarovan'ny vatana.
Fisafidianana famenon-tsakafo magnesium I-threonate
Hamarino tsara fa jereo tsara ireo marika mba hahitana raha misy ny famenony Manezioma I-threonate.
Dosis voatondro amin'ny vovo-magnesium I-threonate
Ny fihinanana manezioma manolo-tena mahazatra amin'ny lehilahy dia 420 miligramy ary amin'ny vehivavy dia 320 miligramy. Na izany aza, mety hiova arakaraka ny taonany izany. Tsy misy fanolorana manokana Magnesium I-threonate. Na dia 1500 ka hatramin'ny 2000 miligrama isan'andro aza dia tokony ho fomba tsara amin'ny tombony azo avy amin'ny kognita. Ohatra iray mahazatra an'ny bestseller ny Magtein izay misy patanty ho an'ny magnesium I-threonate izay nosedraina tamin'ny biby ihany koa. Izy io dia misy famolavolana matanjaka amin'ny fampiasana fanafody mahomby.
Ny fatra atoro ny Magnesium I-threonate dia:
Ny zaza latsaky ny telo ambin'ny folo taona - 80-240 milligram / andro
Vehivavy mihoatra ny efatra ambin'ny folo taona - 300 -360 milligram / andro
Lehilahy efatra ambin'ny folo taona mahery - 400-420 milligram / andro
Vehivavy bevohoka / mitaiza: 310- 400 milligram / andro
Na dia mety ho toy ny doka lehibe aza izany dia tadidio fa ny ampahany ihany no voakaiky. Noho izany, 2,000 milligraman'ny Magnesium l-threonate dia hanatitra magnesioma miisa 144 miligramy, izay ampahatelon'ny Fahatsiarovana Sakafo Sakafo natokana ho an'ny manezioma.
Antony handinihana loharanom-magnesium marobe
Tsy misy mahasakana anao tsy handinika endrika manezioma marobe toy ny glycérate magnesium, citrate na gluconate. Misy famolavolana maro azo ampiasaina eo ambonin'ny latabatra ho an'ny fihinanana maneziôma. Ny mariky ny famantarana ny fihinanana maneziôma ampy tsara dia ny seza malalaka ary atao famantarana mena.
Mandra-pahoviana ny magnesium l-threonate no miasa?
Ny magnesium l-threonate voadoka am-bava dia voalaza fa mitaky iray volana farafahakeliny mba hampiakarana ny haavon'ny magnesium ao amin'ny ati-doha amin'ireo ambaratonga takiana izay ahafahany miatrika aretina sasany ao amin'ny ati-doha, toy ny fahaketrahana, ny tebiteby ary ny fahaverezan'ny fahatsiarovana an-taonany ary misy fiatraikany lehibe amin'ny fitadidiana fananganana sy fiasan'ny ati-doha.
Vokatry ny Magnesium I-threonate
Vitsy ihany ny voka-dratsy ateraky ny magnesium I-threonate izay ao anatin'izany ny fahantrana, aretin'andoha, fihetsiketsehana tsy mahazo aina ary fahatsapana maloiloy. Ny voka-dratsin'ny fahitana manezioma dia ny rafitra fandevonan-kanina. Na izany aza, amin'ny Magnesium I-threonate dia tsy tokony hitranga izany satria natao hampidirina mivantana ao amin'ny ati-doha. Raha manana fanafody hafa ianao, dia tsara ny manatona ny dokotera na ny dokotera anao raha mila torohevitra tsara kokoa ianao. Ny magnesium dia tsy atolotra ho an'ny olona voan'ny aretin'ny voa satria matetika ireny no mihinana ny maneziôma amin'ny vatanao.
Ny tena fanontaniana dia ny - tokony horaisina miaraka amin'ny manezioma hafa ny magnesium I-threonate fanampin-tsakafo? Raha maka magnesium ianao amin'ny olana amin'ny fandevonan-kanina dia manandrama mihinana Magnesium I-threonate. Raha manomboka mahatsapa fitohanana na seza malalaka ianao dia tsara ny miverina irery amin'ny manezioma ho azy. Ny magnesium l-threonate miaraka amin'ny kafe dia afaka manatsara ny fahaizan'ny kognita sy ara-batana fa rehefa miantehitra amin'izany dia mety hiteraka fihenan'ny vatana amin'ny havizanana, tsy fahombiazan'ny saina ary fahasosorana raha tsy raisina hatrany. Izany no anton'ny fiovana mahery vaika amin'ny olona sasany sy ny tsy fahampian'ny fahalianan'izy ireo sy ny zotom-pony hanao hetsika ara-batana. Fanontaniana iray napetraka matetika koa ny hoe mandra-pahoviana no tsy hahitanao ny tena fiovana? Manolo-kevitra ireo manam-pahaizana momba ny fahasalamana hiandry farafahakeliny 4 hatramin'ny 8 herinandro alohan'ny handatsahana ny basinao!
Iza no tsy tokony hihinana Magnesium l-threonate?
Olona manana olana amin'ny fo
Olona manana BP avo tsy voafehy (≥ 140/90 mmHg)
Ireo olona manana aretina aretin-tsaina mila hopitaly tamin'ny taona lasa
Olona manana fahasembanana / aretina amin'ny renal na hepatika
Olona mijaly amin'ny diabeta Type I
Olona manana aretin'ny tiroida tsy miovaova
Ireo olona voan'ny aretin'ny hery fiarovan'ny vatana toy ny Virus / Immunodeficiency Syndrome
Ny olona nisotro zava-mahadomelina na nisotro toaka tao anatin'ny roa volana lasa
Olona mijaly amin'ny vokatra carotid, lacunes voamarina, fanafihana ischemika vetivety ary aretina pulmonary lehibe
Olona tsy salama saina
Ny olona manana toe-javatra mety ahafahan'ny suplementement dia miteraka fanoherana ny fizahana ny tomograpia emission positron (PET), ao anatin'izany ny lalan-dra na aretim-po tato anatin'ny enim-bolana lasa na tsy fahaizana mandry adiny iray
Ny olona mihinana fanafody izay tsy azo raisina miaraka amina suplementezième manezioma toa ny manify ra sy antibiotika.
Ny olona manana allergy na fahatsapana ny zavatra ampiasaina ao amin'ny fanampiny
Ny vehivavy bevohoka, mampinono, na mikasa ny hitoe-jaza dia tokony manatona dokotera alohan'ny handraisana ity famenon-tsakafo ity
Misafidy ny famenon-tsakafo mety: famerenana magnesium l-threonate
Ny olona mijaly amin'ny torimaso sy ny tsy fahampian'ny fifantohana dia mampiasa an'ity famenon-tsakafo ity - Magnesium l-threonate feno Vitaminina - C threonate satria mahatonga azy io ho avo kokoa amin'ny bioavailability raha oharina amin'ny famenon Magnesium l-threonate hafa. Ny fanampin-tsakafo dia manana ny hery hiampitana ny sakana amin'ny ati-doha izay manome maneziôma sahaza ao amin'ny ati-doha ary manatsara ny fahaizan'ny kognita. Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny maneziôma amin'ny theanine sy ireo mineraly tena ilaina hafa, ny vatana dia azo omena sakafo ilaina isan'andro fa tsy mampihena vitamina sy mineraly hafa.
Manezioma l-threonate dia manatsara ny fahatsiarovan-tena amin'ny olon-dehibe izay mihoatra ny 50 taona ary mijaly noho ny dementia, ny aretina Parkinson na ny soritr'aretin'ny neurolojia malemy.
Ny fampiasana isan'andro ny fanampin-tsakafo dia manatsara ny fahatsiarovan-tena, mampitombo ny fahaizanao misaina ary mianatra manodidina ny valo ambin'ny folo isan-jato ao anatin'ny faharetan'ny telopolo ka hatramin'ny enimpolo andro. Izy io dia miteraka vokatra mampitony sy mampitony ny hozatra ary manome voka-batana ara-batana sy kognita eo noho eo.
Hitan'ny olona sasany fa mety ny maka an'ity famenon-tsakafo ity amin'ny endrika pilina satria misy gelatina manarona ireo pilina izay antonony, mora atelina ary mora levona. Ny pilina mifono gelatin dia manala ireo poizina amin'ny rafi-pandevonan-kanina
Ny atiny threonate ao amin'ny famenony dia manafoana ny havizanana ara-batana sy ara-tsaina, mampiroborobo ny torimaso amin'ny alàlan'ny fanalefahana ny vatana. Ny torimaso tsara dia manampy amin'ny fisorohana ny soritr'aretin'ny tongotra tsy milamina (ny toe-javatra izay miteraka faniriana tsy voafehy hifindra ny tongotrao) sy ny nofinofy maloto.
Rehefa nalaina nandritra ny telopolo andro mahery ny famenon-tsakafo dia nanatsara ny fifantohana ary nanamaivana ny zavona ara-tsaina ary nampitombo ny fahaizan'ny kognita izay nahatonga ny fifantohana bebe kokoa sy ny famokarana bebe kokoa mandritra ny asa, eo am-pamakiana, fianarana na fanaovana hetsika ara-batana.
Ny sakafo fanampiny dia tokony ho raisina amin'ny sakafo na alohan'ny hatory. Ny RDA dia kapsula telo ka hatramin'ny efatra isan'andro miaraka amin'ny sakafo, fa azo ampiasaina aorian'ny sakafo ihany koa rehefa tena miasa ny taratasy mivalona fandevonan-kanina mandritra io fotoana io, manome valiny haingana kokoa.
Ny famenony dia misy voka-dratsy kely indrindra. Ilay adverse dia misy vavony marary saina ary ny malemy fanahy dia aretin'andoha na torimaso. Ka, azo lazaina fa Magnesium l-threonate dia azo antoka tanteraka ho raisina ho famenony isan'andro tsy dia misy vokany ratsy ratsy.
Aiza no azonao ividianana Magnesium l-threonate?
Soa ihany, mpanamboatra, mpivarotra ary marika maro no mivarotra famenon-tsakafo mahatalanjona - Magnesium I-threonate. Mora hita amin'ny Internet ihany koa izy io ary tsy mila miady mafy hividy azy io ny olona. Na izany aza, zavatra iray tokony tsy hadino fa ny mora indrindra dia tsy tsara indrindra. Mitadiava marika tsara indrindra foana, mpivarotra sy mpanamboatra azo itokisana ary mendri-kaja, iray izay voamarina ny fizotry ny famokarana sy ny fitehirizana azy
Magnesium l-threonate vovoka Aostralia
Any Aostralia, ny fanampiana dia azo alaina amin'ny endrika vovoka sy kapsily. Ny vokatra dia misy toy ny - Neuro-Mag Magnesium l-threonate Powder
Famenon-javatra momba ny vokatra
Fanompoana ny sotro lehibe 1 (eo ho eo. 3.11 grama)
Serivisy isaky ny kaontenera manodidina ny 30
Birao Per Serving
Serivisy tokana amin'ny famenon (Neuro-Mag® Magnesium l-threonate) dia manome 2,000 milligraman'ny magnesium l-threonate, izay adika amin'ny 144 milligrams an'ny Mg. Ny atidoha dia mandray avy hatrany ny famenon-tsakafo ho an'ny fahasalaman'ny ati-doha sy ny fahalalana tanora. Ny fanampiana dia mihazona ny fihazonana ny fifandraisana synaptika eo amin'ny sela atidoha ary mampitombo ny làlam-pamantarana ny sela ati-doha. Izy io dia zava-pisotro mamy misy poaka mamy voankazo mamy.
Asidra sitrika, akasia hihy, maltodextrin, tsiro voajanahary, nalaina stevia, silica.
Magnesium l-threonate vovoka Kanada
Any Canada, misy ny famenony toy ny - Naka Platinum Magnesium l-threonate
Ampio zava-misy momba ny vokatra
Naka Pro's Pro MG12 Magnesium l - threonate azo ampiasaina ho famenony any Canada dia naseho fa hany endrika maneziôma afaka mampitombo ny haavon'ny magnesium ao amin'ny ati-doha. Misy 144 milligrams an'ny Mg sy 2000 milligrams an'ny magnesium l-threonate PRO MG12 dia mety hiaro ny ati-doha tsy ho simba ny fahatsiarovana ary hanatsara ny soritr'aretin'ny aretina Alzheimer tany am-boalohany.
Isa isaky ny fanompoana
Akora - Ny fatra tsirairay amin'ny kapsily 3 dia misy magnesium l-threonate 2000 milligram (144 milligram an'ny Mg elemental)
Fangaro tsy fanafody
Cellulose microcrystalline, stearat maneziôma (loharano legioma), hypromellose (fatran'ny kapsily)., Tsy misy gluten, voanjo, atody, vokatra vita amin'ny ronono, trondro na akorandriaka, vokatra avy amin'ny biby, katsaka, loko na tsiro namboarina, varimbazaha na masirasira.,
Magnesium l-threonate vovoka United Kingdom
Any Royaume-Uni, ny famenony dia misy amin'ny endrika vovoka sy kapsily. Io vokatra io ihany no misy any Aostralia.
Mihidy mafy ao amin'ny toerana mangatsiaka sy maina
Manezioma I-threonate - ny dingana manaraka
Ny magnesium dia zava-dehibe amin'ny fahasalamana ara-batana sy amin'ny fahasalamana ara-tsaina. Ny tena maha-zava-dehibe ny fitsaboana ara-pahasalamana ho an'ny maneziôma dia navadiky ny tsy fahaizany mitsofoka ao anatin'ny sosona miaro amin'ny ati-doha. Ny magnesium I-threonate dia afaka miatrika an'io amin'ny alàlan'ny fidirana mivantana amin'ireo faritry ny ati-doha tadiavina. Satria ny ankamaroan'ny olona dia mijaly noho ny tsy fahampian'ny magnesium ao amin'ny vatany, dia mendrika tokoa ny manome tifitra vovo-magnesium I-threonate amin'ny fanatsarana ny fahafahan'ny ati-doha miatrika ilay olana.
Ny fampahalalana omena dia mifototra amin'ny fitaovana fikarohana sy ny fikarohana. Tsy neken'ny FDA izany ary tsy natao hamantarana, hanasitranana na hisorohana aretina na olana ara-pahasalamana.
Raha jerena fa ny Governemanta misahana ny sakafo sy ny zava-mahadomelina dia tsy mifehy ny famenon-tsakafo amin'ny fomba mitovy amin'ny fanombanana sy fanaraha-maso ny zava-mahadomelina, mila mitady marika voamarin'ny antoko fahatelo ny olona, ​​toy ny NSF International (fikambanana amerikana fitsapana, fanaraha-maso ary fanamarinana). Labdoor, na Laboratoara Underwriters, ho fiarovana sy kalitao.
Farany fa tsy ny kely indrindra, dia eritrereto ny fisorohana ireo famenon-tsakafo izay misy akora artifisialy, toy ny loko, tsiro ary preservatives.
Xu T, Li D, Zhou X, Ouyang HD, Zhou LJ, Zhou H, Zhang HM, Wei XH, Liu G, Liu XG. Fampiharana am-bava ny Magnesium-L-Threonate Attenuates Vincristine-voatosika Allodynia sy Hyperalgesia amin'ny alalàn'ny fanavaozana ny Tumor Necrosis Factor-α / Nuklear Factor-κB famantarana. Fanatoranana. 2017 Jun; 126 (6): 1151-1168. doi: 10.1097 / ALN.0000000000001601. PubMed PMID: 28306698.
Wang J, Liu Y, Zhou LJ, Wu Y, Li F, Shen KF, Pang RP, Wei XH, Li YY, Liu XG. Ny Magnesium L-threonate dia misakana sy mamerina ireo tsy fahatsiarovana fitadidiana mifandray amin'ny fanaintainan'ny fanaintainan'ny aretin-kozatra amin'ny alàlan'ny fampiatoana ny TNF-α. Dokotera fanaintainana. 2013 Sep-Oct; 16 (5): E563-75. PubMed PMID: 24077207.
Mickley GA, Hoxha N, Luchsinger JL, Rogers MM, Wiles NR. Ny hafainganam-pandehan'ny magnesium-L-threonate amin'ny fomba fiterahana dia mampihena ny fitrandrahana tsimoka azo tsapain-tanana. Pharmacol Biochem Behav. 2013 Mey; 106: 16-26. doi: 10.1016 / j.pbb.2013.02.019. Epub 2013 Mar 6. PubMed PMID: 23474371; PubMed Central PMCID: PMC3668337.
Asidra Alpha Lipoic (ALA)
Home Momba anay Blog Contacts Products